कानुन पोष्ट संवाददाता Thursday, July 2, 2020
भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाका एक वृद्धले ९३ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । शारीरिकरुपमा समेत अशक्त रहेका स्थानीय लाटा सार्कीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनी रहेको स्थान अरुण गाउँपालिकाको प्याउली पुगेर नागरिकता वितरण गरेको हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा मानव अधिकारीकर्मीले नागरिकता दिलाउनका लागि पहल थालेका थिए । सांसद सुदन किराँतीको निर्देशनपश्चात् केही महिनाअघि नै सार्कीलाई नागरिकता वितरण गरेर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको भए पनि लकडाउनले ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले जानकारी दिनुभयो । सार्कीलाई नागरिकता वितरणका लागि सांसद किराती पनि बुधबार प्याउली पुग्नुभएको थियो ।
हेरचाह गर्ने अन्य कोही नभएकाले अधिकारकर्मीको अगुवाइमा सार्कीलाई मानव सेवा केन्द्र विराटनगर लैजाने तयारी गरिएको अधिकारकर्मी सम्झना प्रधानले जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि सडकमा बसेर मागेर खादै आएका सार्कीलाई अरुण गाउँपालिका– २ को सिफारिसमा वंशजका आधारमा नागरिकता दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद लुईंटेलले जानकारी दिनुभयो । उनले आफ्नो नाम बताउन नसक्ने भएकाले स्थानीयले बोलाउँदै आएको लाटा सार्कीको नाममा नागरिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
जापानमा साइकलको घण्टी बजाए ५०० डलर जरिवाना
झापामा श्रीमति छोडन पाउ भन्दै ३ सय ४ जना पुरुषले हाले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा
विवाहपछि मानिस मोटाउने ६ रोचक कारण !
आफ्नै शिक्षकले करणी गरेपछि यी युवतीले जे गरिन जस्ले बिश्व हल्लायो
PREVIOUS POST Previous post: खानेपानी योजनामा नक्कली उपभोक्ता समिति खडा !
NEXT POST Next post: राहत पाइनन् दुई सन्तान गुमाएकी कमलाले